I-recipe Crispy prawns kwi-batter
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako ZoLwandle I-Shrimp
Iingqungqungquthela ze-Crispy kwi-batter
I-crispy shrimps Mhlawumbi uqaphele ukuba rhoqo ukubetha i-batter, ephoqeleka emva kokupheka, emva kwemizuzu emihlanu iba lula. Elinye isiFulentshi cultist ukholelwa ukuba iiqanda zibeka ityala ngale nto, zenza umphumo we "pie" kwintlama. Udongwe kule recipe luhlala lukhuni, ngaphezu koko, ukuba i-shrimp kwi-batter sele ikhulile, ungabuyela yonke impahla yaso yangaphambili ngokubamba ehhavini imizuzu emi-5 ukuya kumaqondo angama-200. I-Shrimp ilungile ukuthatha elikhulu, umzekelo, i-tiger, ngoko unako ukwenza ama-donuts amahle nge-shrimp ngaphakathi, kodwa ezincinci zilungile, zinokuthi "zihlanjwe" njengeembewu.
I-Shrimp efrijiweyo 500 g
I-Potato isitashi 120 g
Ubunzima bokubhaka 10g
I-oyileji engapheliyo i-250ml
Inyathelo 1 Ukupheka, sidinga izi zithako ezilandelayo: imfucu, ufulawa, isitashi, amanzi abandayo, ityuwa, i-powder baking okanye i-soda, icima ngeviniga, ioli ye-sunflower.
Inyathelo 2 I-Shrimp ibilise ngamanzi abilayo imizuzu emi-2.
Inyathelo lesi-3 Sihlambulula i-shrimps ukuze umsila uhlale ungafundwa.
Inyathelo 4 Hlanganisa umgubo kunye nesitashi kunye netyuwa. I-powder yokubhaka ayinakongezwa, kuya kufuneka ukuba yenziwe ekupheleni.
Inyathelo lesi-5 Yongeza amanzi encinci abandayo kwaye uxoke inhlama ngaphandle kwamaqabunga. Ukunyaniseka kufuneka kube phakathi kwama-pancakes kunye namafritters. Sibeka inhlama imizuzu engama-30 kwisiqandisini.
Inyathelo 6 Sibeka ioli ukuba ifudumale kwaye ngeli xesha yongeza ipowder yokubhaka okanye i-soda, icime ngeviniga.
Inyathelo lesi-7 I-panimiruem yokucoca ngomgubo, ukugubha ngokugqithiseleyo kwaye, ukubambelela umsila, utywebe inhlama.
Isinyathelo 8 Dlulisa i-shrimps ibe ibhotela kunye gazinga kuze kube yintliziyo. Andizange ndithulule ininzi yeoli, ngoko ndajika i-shrimp. Iimpawu ezikhulu kakhulu zifakwe kwioli, ngokupheleleyo, zibambe umsila, kwaye zijikeleze i-shrimp ithululelwe i-nice donut.
Isinyathelo 9 Beka i-shrimp kwiphilisi yephepha ukususa nayiphi na ioli.
Inyathelo le-10 I-Shrimp i-crisp ekhethiweyo yokutya. Ukuba isitya silungiselelwe isidlo sakusihlwa, unako ukukhonza imfucu nge-hot sauce eshushu okanye, ngokuchaseneyo, i-sweet berry - othanda ngaphezulu.
I-pizza kwi-microwave ne-grill
Risotto kunye nevenkile zaselwandle
I-spaghetti enezilwanyana zaselwandle
I-Shrimp kwi-bready breaking
I-Saladi ukusuka kwi-shrimps kunye neentonga ze-crab, isaladi ngo-Eva wonyaka omtsha ngesithombe
I-Schnitzel eyenziwe ngenyama enobisi
I-Photoshop okanye ukutya: U-Ekaterina Odintsova utshele indlela alahlekelwa ngayo isisindo
Ukudweba abahlobo kwimihla ngemihla
Kutheni umntwana enobudlova?
Imidlalo yeminyaka emitsha kunye nemincintiswano yamashishini
Iimpawu zonyaka weNyoka yamanzi amnyama
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-sardonyx
UStas Pieha waqhekeza nomkakhe
Indlela eya entliziyweni yowesifazane
Indlela yokuhlamba izandla ngokufanelekileyo
Ziziphi iivithamini ezifunekayo ngexesha lokukhulelwa?